Vely “bois rond” Tratra teny Paraky Soanierana ireo olon-dratsy
Mihorohoro indray ireo mody hariva, indrindra ny alina fa miala any indray ny vely bolabolan-kazo.
Mpanendaka roalahy no voasambotry ny Polisin'ny Compagnie Urbaine d'Intervention ny alatsinainy 30 septambra tokony ho tamin'ny 5 ora. Nanatanteraka sinto-mahery izy roalahy ka naratra mafy ny iray tamin’ireo roa voaendaka noho ny vely bois rond nahazo azy raha natsipin’ireto olon-dratsy tany anaty rano kosa ny iray hafa. Teny amin'ny tetezan'ny Paraky hihazo an'i Namontana no sarona izy ireo. Nisy lehilahy roa nanatona Polisy teo Namontana nitaraina fa voaendaka izy ireo ny alahady ka andiana mpanendaka maromaro no nolazainy fa nanendaka azy ireo teo amin'ny tetezana Paraky . Nilaza koa izy ireo fa mbola tazany mivezivezy eo ireo mpanendaka. Nidina teny an-toerana avy hatrany ny Polisy rehefa azo avokoa ny angom-baovao mahakasika ireto mpanendaka. Tao anatin’ny fidinan’ny Polisy teny an-toerana no nahatratrarana azy roa. Mitohy kosa ny fanadihadiana mahakasika ireo naman’ireto olon-dratsy ireto ho famongorana ity vely “bois rond” ity.